Gnome & Kde — MYSTERY ZILLION
July 2008 edited January 2009 in Ubuntu
Gnome နဲ့ Kde တိုရဲ့ ကွဲပြားခြားနားပုံ...အလုပ်လုပ်ပုံ...ဘာကြောင့် Gnome ကို သုံးတယ်...ဘာကြောင့် Kde ကို သုံးတယ်... Gnome ဆိုတာဘာလဲ....Kde ဆိုတာဘာလဲ...မေးတာတွေ အရမ်းများသွားပြီ:)
ကျေးဇူးပြုပြီး မြန်မာလို ရှင်းပြပေးပါခင်ဗျာ....
Gnome ကော KDE ကောက Linux Desktop Environment ပါ။ အကောင်းဆုံးကတော့ wiki မှာ ကြည့်တာပဲ။ မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ သေသေချာချာ ရှင်းပြဖို့ ခက်တယ်ဗျ။
Linux က FOSS လေ... ဒါကြောင့် သူ့အတွက် Desktop Environment က ၁ ခုမကဘူး.. နာမည် အကြီးဆုံးကတော့ Gnome နဲ့ KDE ပဲ... Gnome ကတော့ windows ပုံစံနဲ့တူပါတယ်.. KDE ကတော့ ပိုပြီး လှပပြီး effect တွေ စုံပါတယ်...
Gnome အကြောင်းတော့ ရှိသေးဘူး.. KDE ကိုတော့ http://www.mysteryzillion.com/wiki/index.php?title=KDE
အဲမှာနည်းနည်းလေး မြန်မာလို ကြည့်လို့ရပါတယ်
Desktop Environment တွေမတူတဲ့အတွက် သုံးရတာ program တွေလည်း မတူတော့ပါဘူး..
gnome အတွက် program က gnome မှာပဲ သုံးလို့ရပြီး KDE အတွက် software တွေ program တွေကလည်း KDE မှာပဲ သုံးလို့ရပါတယ်.. ကျွန်တော် စမ်းသုံးတုန်းကKDE မှာ firefox သုံးမရဘူးနဲ့တူတယ်.. နောက်ပြီး openoffice လည်းမရဘူး... (အခုတော့ သေသေချာချာ မသိပါ)
GNOME က Gtk UI Library ကိုသုံးပြီး KDE က တစ်ခြား K နဲ့ စတဲ့ Library တစ်ခုကို သုံးပါတယ်။
Linux ပေါ်မှာ GNOME ရော KDE ပါ တင်ထားရင်တော့ GNOME Interface ကို သုံးနေတုန်း KDE Program ကို ပါ Run လို့ရနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတော့ စမ်းဖူးပါသည်။ အသေအချာ မမှတ်မိတော့ပါ။
UI ပိုင်းမှာ KDE ကပိုလှပြီး၊ GNOME ကနည်းနည်း ပုံတုံးပါတယ်။
ကျွန်တော် ကို်ယ်တိုင်ကတော့ GNOME ကိုပိုသဘောကျပါတယ်။ Linux စသုံးကတည်းက GNOME
ဒါဆိုရင် kotharthar နဲ့ Saturngod ပြောသလို ဒီကောင်နှစ်ကောင်က Desktop Environment တွေအတွက်ဘဲလား... အခု Ubuntu 8.04 ကို Install လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်..
Gnome က Ubuntu အတွက် Desktop Environment အနေနဲ့ တခါတည်းပါပြီးသာပေါ့.....KDE ကို သုံးချင်တယ်ဆိုရင် Install ထပ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုမှာပေါ့....ဒါမှမဟုတ်ဘဲ တခြား Desktop Environment လည်း သုံးနိုင်တာပေ့ါ...
Ubuntu မှာ KDE package ထပ်သွင်းလို့ပြီးတော့ KDE ပြောင်းသုံးလို့ရတယ်။ ဒါမှမဟုတ် Kubuntu သုံးရင်ရပါတယ်။ Kubuntu က K desktop environment ပါ။
အိုကေ ကိုစေတန် ခင်ဗျာ...ဒီလောက်ဆိုရင် နားလည်သလိုလိုတော့ ရှိလာပြီ။ဒါနဲ့ မသိလို့မေးပါရစေ။Ubuntu ကိုသုံးတဲ့ အခါမှာ အင်တာနက်မရှိရင်လုံး၀ အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုတာတော့မှန်ပါတယ်။ Ubuntu ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာ သုံးရင် အင်တာနက်မရှိဘဲ ဘယ်လိုသုံးကျမလဲ ။ သူ့အတွက်လိုတဲ့ Package တွေအားလုံးကို ဒေါင်းလုပ်ချ ထားပြီရင်ကော အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလား ။ မြန်မာနိုင်ငံ မှာကော Ubuntu သုံးတဲ့သူတွေရှိလား ။ Linux နဲ့ Unix အခြေခံသင်တန်းတွေကော မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိလား ။
မြန်မာနိုင်ငံ မှာကော Ubuntu သုံးတဲ့သူတွေရှိလား ။ Linux နဲ့ Unix အခြေခံသင်တန်းတွေကော မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိလား ။
၂၀၀၆ လောက်တုန်းက ဆရာ ဖိုးနိုင်၀င်း (Masterpiece) ဆီမှာ သင်ဖူးတယ် .
မြန်မာနိုင်ငံမှာ Ubuntu သုံးတဲ့လူတော်တော်များများဟာ အင်တာနက် connection ကောင်းကောင်းရတဲ့လူတွေ သုံးကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အင်တာနက်ဆိုင်မှာ လုပ်တဲ့လူ။ ဒါမှမဟုတ် ဖွင့်ထားတဲ့လူတွေ သုံးကြတယ်။ နောက်ပြီး တချို့တချို့သော လူတွေ သုံးကြတယ်။ Windows လောက်မတွင် ကျယ်ပေမယ့် သုံးကြပါတယ်။ Package တွေ download ချတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ တစ်ခြားမကြည့်နဲ့ Graphic Card driver ကနေ package download ချပြီး သွင်းလို့မရဘူး။ Online ကနေ တိုက်ရိုက်သွင်းမှပဲရတယ်။ အဲဒါမှ effect တွေရမှာပါ။ ကိုယ်က အင်တာနက်ဆိုင်မှာ တချိန်လုံးထိုင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ တော်တော်သုံးလို့ကောင်းတဲ့ OS ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ Ubuntu သုံးတဲ့လူတော်တော်များများဟာ အင်တာနက် connection ကောင်းကောင်းရတဲ့လူတွေ သုံးကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အင်တာနက်ဆိုင်မှာ လုပ်တဲ့လူ။ ဒါမှမဟုတ် ဖွင့်ထားတဲ့လူတွေ သုံးကြတယ်။ နောက်ပြီး တချို့တချို့သော လူတွေ သုံးကြတယ်။ Windows လောက်မတွင် ကျယ်ပေမယ့် သုံးကြပါတယ်။ Package တွေ download ချတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ တစ်ခြားမကြည့်နဲ့ Graphic Card driver ကနေ package download ချပြီး သွင်းလို့မရဘူး။ Online ကနေ တိုက်ရိုက်သွင်းမှပဲရတယ်။ အဲဒါမှ effect တွေရမှာပါ။ ကိုယ်က အင်တာနက်ဆိုင်မှာ တချိန်လုံးထိုင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ တော်တော်သုံးလို့ကောင်းတဲ့ OS ပါ။[/quote
ကို Saturngod ရေ .. internet မရှိရင် .. Ubuntu 8.10 အတွက် installation ပိုင်းနဲ့ တခြားဘယ်အပိုင်းတွေမှာ .. ဘာတွေ error တက်နိင်ပါသလဲ ??
နောက်ပြီး ..ကျွန်တော် ကခုမှ Ubuntu 8.10 Cd ကို install လုပ်မလို့ပါ ..
internet မရှိ၇င် ..သုံးလို့မရနိုင်ဘူးလား?? ခင်ဗျာ ...
thread နေရာမှားနေရင် ဖျက်လိုက်ပါနော် ..
** ကိုSaturngod ပေးထားတဲ့ How to install Ubuntu စာအုပ်က DL လုပ်လို့ မရလို့ ပါ **
ကျေးဇူးပါ ကိုsatungod ရေ ကျွန်တော်လည်း Ubuntu ကို install လုပ်ထားပါတယ်.....ဒါပေမဲ့ internet တော့မရှိပါဘူး....
အကိုပြောပုံနဲ့ ဆို ကျွန်တော်အဲဒီ OS ကိုပြန်ဖြုတ်မှနဲ့တူပါတယ်...
Ubuntu ကိုပြန်မဖြုတ်ပါနဲ့အုံးဗျား .. ကိုစေတန်ကြီးဆီသွားပြီး အကူအညီသွားတောင်းလိုက်ပါ။ Internet မရှိပေမယ့်လဲ သူငယ်ချင်းတွေအကူအညီနဲ့ လိုချင်တဲ့ packages တွေကို ကိုယ့်စက်မှာ cd/dvd နဲ့ install လုပ်လို့ရပါတယ်။